चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट रोक्न डा. केसीको माग | Diyopost
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट रोक्न डा. केसीको माग
काठमाडौँ , असार २६ । प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि छनोट प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् । छनोट प्रक्रिया त्रुटिपुर्ण भएको भन्दै तत्काल नसच्याए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका हरु सबै अयोग्य भएको भन्दै डा. केसीले नाम फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सरकार राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा चलेको भन्दै डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस हुृनबाट जोगाउनका लागि आवेदन दिएका निवेदकहरुले तत्काल नाम फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।